कविता – Khabar Times: Nepal's Online Newspaper
शिर्षक: “विकल्पको ब्यथा” ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ जब कुल्चिइन्छन् स्वभिमान हाम्रो परदेशमा, तब झुक्दछ शिर सगरमाथाको स्वदेशमा । जब वीर गोर्खालीको पगडी गुथ्दै नेपाली लड्दछन् आवेशमा , तब रणभुमी रङ्गीइन्छ नेपाली भेषमा ।। जब शुन्य हुन्छन् बाबाआमाका आम्दानी , तब देखिन्छ भाई-भाई बिच
जीन्दगी के हो र जीउनेको मजा अर्कैै हुन्छ मिहनेत र परिश्रम के हो र सफलताको मजा अर्कै हुन्छ ! अनुसासन र धर्यता के हो र परिवर्तनको मजा अर्कै हुन्छ !! दुःख र कष्ट के हो र सन्टुष्टीको मजा
नेपाली कविता संकटमा ः डा. अमर गिरी
दाङ, फाल्गुन २९ । समालोचक एब कवि डा. अमर गिरीले नेपाली कविता संकटमा परेको बताएका छन् । राप्ती साहित्य परिषदले आयोजना गरेको एकल कविता बाचन कार्यक्रममा बोल्दै उनेले नेपाल मात्र नभएर विश्वमा नै कविताको पाठक बढ्न नसकेको बताए । यसले
[कविता] नरुवाउनु कसैको आत्मा
नरुवाउनु कसैको आत्मा उसको पनि हाम्रो जस्तै आसु हुन्छ ! नदिनु कसैलाई धोका उसको पनि हाम्रो जस्तै मन हुन्छ !! नदेखाउनु कसैलाई झुटो सपना उसको पनि हाम्रो जस्तै चाहना हुन्छ !!! -टु एस
~बुद्धिसागर~ बेरोजगार रामेश्वरले भर्खर थुकेको दादाखैनीको छाप छैन मेटिएका । पहिरो पीडित दिलकुमारी सोताङ्गले चिरा पारेका हरिया काँक्राका बियाँहरु झर्न पाएका छैनन्-भुइँमा । हामीहरु भर्खर टुकि्रएको तरबूजको राता टुक्राजस्ता राता झन्डाहरु हल्लाउँदै फेरि आइपुग्यौँ उही रत्नपार्क । कुनै महँगो बियरको
~विश्वेश्वरप्रसाद कोइराला~ विगतको जिन्दगीको सम्झना हो- वर्तमान। वा, म भन्न सक्छु, हामी विगतका अनुभवलाई पुन: लागू गर्न खोज्छौं बितेका रातको सपनालाई प्राप्त गर्न खोज्नु हो- वर्तमान। विगत यथार्थ हो, वर्तमान एउटा कथा अस्तित्व रहनुमा परिणत हुन्छ- आजको रात। गद्य विगत